बिरालाहरुमा फुस्रा | Noti बिरालाहरू
सबै बिरामीहरू जुन हाम्रो बिरालाहरूलाई धेरै सताउन सक्छ, ती पक्कै पनि हो पिसो। हाम्रा प्यारा कुकुरका यी साना दुश्मनहरू सजिलै र द्रुत रूपमा पुन: उत्पादन गर्दछन्, यदि तिनीहरू समयमै नियन्त्रित भएनन् भने, हामी पशुहरूमा मात्र होइन, घरमा पनि प्लेग हुन सक्छ।
तपाईंको बिरालोको लागि, र तपाईंको लागि पनि, गरिनु पर्ने एउटा चीज, विशेष गरी तातो महिनाहरूमा, यो कीरा यसको रक्षा गर्न पिपेट वा कीटनाशक स्प्रे लागू गर्दै। र यो यो हो कि बिरालाहरूमा चिप्लिरहेको पीडाले हामीलाई थुप्रै समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ जुन हामी यस मार्गनिर्देशनमा तपाईंलाई दिने छु कि चालहरूद्वारा हामी समाधान गर्न सक्छौं। अरु के छ त, तपाईं प्राकृतिक कीटनाशक बनाउन सिक्नुहुनेछ, जुन धेरै उपयोगी छ यदि तपाईंको प्यारी रासायनिक पाइपेट र स्प्रेमा एलर्जी छ।
1 एक चिसो के हो?
1.2 जीवन चक्र
2 रोगहरूले निम्त्याउन सक्छ
3 मेरो बिरालो भागेको छ भने कसरी म भन्न सक्छु?
4 बिरालाहरुमा पछाडि रोकथाम
4.1 बिरालाहरुमा फ्लाईससँग लड्न रासायनिक कीटनाशक
4.1.4 Antiparasitic स्प्रे
4.2 प्राकृतिक कीटनाशक
4.2.1 बिरालाहरूमा चिसोको लागि घरेलु उपचार
4.2.1.2 बियर खमीर
4.2.1.3 चिया रूख आवश्यक तेल
5 मेरो अनुभव
एक चिसो के हो?
महामारीको राम्रोसँग लड्न यो राम्रोसँग जान्न सिफारिस गरिन्छ। यस तरिकाले हामीलाई यसका कमजोर पोइन्टहरू पत्ता लगाउन सजिलो हुनेछ, र हामी सब भन्दा उपयुक्त समयमा हाम्रो बिरालामा रोकथाम उपचार गर्न अगाडि बढ्न सक्छौं। त्याे भनेपछि, के हामीलाई वास्तवमा थाहा छ कि एउटा फ्लाई भनेको के हो?
फ्लाईहरू साना कीराहरू हुन् (लगभग mm मिलिमिटर लामो), पखेटा बिना, अर्डर सिफोनाप्टेरासँग सम्बन्धित छ। उनीहरू स्तनपायीहरूका रगतमा खुवाउँछन् उनीहरूको होस्टको रगत अवशोषित गर्न मौखिक संयन्त्रको लागि धन्यवाद, र यो पर्याप्त थिएन भने, लगभग २,००० प्रजातिहरू विश्वभरि चिनिन्छन्। चोटपटकमा अपमान थप्न, ती मध्ये केही बुबोनिक प्लेग, टाइफस वा टेपवर्म जस्ता डरलाग्दो रोग सार्दछन्। तिनीहरू रंगको गाढा हुन्छन्, उदाहरणका लागि ती बिरालाहरूलाई चिन्ता गर्ने बिरालाहरू रातो रंगको हुन्छन्।
यसको खुट्टा लामो छ, ठूला जम्पहरू बनाउन तयार छ (तेर्सो दिशामा cm 34 सेमीसम्म, र ठाडो दिशामा १cm सेमी)। यो तब हो, जनावर जुन यसको साइजको सम्बन्धमा एक जम्पमा सबैभन्दा लामो यात्रा गर्न सक्दछ। र यसको शरीर लेटमा संकुचित भएकोले, यो होस्टको फरबाट अदृष्य हिंड्न सक्छ।
फ्लाईहरू कीराहरू हुन् जसको जीवन चक्र परिवर्तनशील छ, र धेरै उत्पादक। जब तिनीहरू अण्डा हुन्छन्देखि लिएर तिनीहरू वयस्क हुन्छन्, तिनीहरू गर्मी महिनाहरूमा दुई हप्ता लिन सक्दछन्, यदि मौसम चिसो छ भने आठ महिनासम्म। महिलाहरूले खानेकुरा पछी हरेक दिन २० अण्डाहरू राख्छन्; आफ्नो सबै जीवन मा उसले लगभग put०० राखेको छ, जुन बिछ्याईना गरेपछि लगभग १० दिन पछि लाग्नेछ।
जब ती लार्भा छन्, तिनीहरूले कुनै असुविधा पैदा गर्दैनन्किनकि उनीहरूले रगत चूसदैनन्। तिनीहरू केवल मृत भुवा र छाला, वयस्क फ्लाई मल, र अन्य मलबेसमा मात्र खुवाउँछन्। तर केहि दिनहरूमा तिनीहरू pupae हुन्छन्, र उनीहरूको ककुनमा सुरक्षित हुन्छन् जब तिनीहरू वयस्क चरणमा पुग्छन् १ 14 दिनमा मौसम राम्रो छ भने; अन्यथा, त्यो हो, यदि यो जाडो छ र तापक्रम १० डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा तल रहन्छ भने, तिनीहरूले यसलाई लार्भा वा प्यूपाको रूपमा खर्च गर्दछन्, र वसन्त मा तिनीहरू विकास समाप्त हुनेछ.
रोगहरूले निम्त्याउन सक्छ
फ्ल्यासले प्रायः पाहुनाहरूलाई बढी भयter्कर कष्ट दिउँदैन, तर यो ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि तिनीहरूले रोग सार्न सक्छन, बुबोनिक प्लेग वा टाइफस। बिरालो फ्लाई, जसको वैज्ञानिक नाम छ Ctenocephalides फेलिसथप रूपमा, यसले प्रसारित गर्न सक्दछ टेनिया.
ती कारणले गर्दा हाम्रो मित्रहरूमा एक भन्दा बढी असन्तुष्टि हुन सक्छ। पिस्लाहरू बिरालाहरूमा सार्न सक्ने रोगहरू हुन्:
Filariasis: तिनीहरू नेमाटोडहरू हुन् जसले सबकुटेनस टिश्यु र मुटुलाई संक्रमित गर्दछ; वास्तवमा यो 'हार्टवर्म रोग' को नामले परिचित छ। लक्षणहरू हुन्: पुरानो खोकी, सामान्य रूपमा सास फेर्न समस्या, कम भूक, र सूचीहीनता। यदि यो समय मा उपचार गरिएको छैन भने, यो हस्तक्षेप गर्नु पर्छ।
हेमोप्लाज्मोसिस: ती ब्याक्टेरियाहरू हुन् जसले संवहनी प्रणालीलाई असर गर्छन्। संक्रमित बिरालाहरू सूचीविहीन हुनेछन्, तौल घटाउने छ, ज्वरो आएको छ, र गम्भीर अवस्थाहरूमा एनोरेक्सिया हुन सक्छ।
Dipylidiosis: यो आन्द्रा परजीवी टेपवर्मको रूपमा चिनिन्छ। यो बिरालाको आन्द्रामा बस्छ र उसले के इन्जेट्समा फीड गर्दछ। त्यहाँ कुनै प्रमुख लक्षणहरू छैनन्, गुदा खुजली बाहेक अन्य चीजहरू तपाईलाई उठ्न र भुइँमा क्रॉल गर्न बाध्य पार्छन्।
फ्लाई बाइट एलर्जी dermatitis (FAD): यो चार मध्ये कम से कम गम्भीर रोग हो, तर सबैभन्दा सामान्य। प्रतिक्रिया तब हुन्छ जब एउटा फ्लीले बिरालोको रगत चुस्दछ, जुन खुजली हुन थाल्छ र प्रभावित क्षेत्र फुलेको हुन्छ, रातो रंगको। थप रूपमा, तपाई यो देख्नुहुनेछ कि यसले धेरै चोटि कसरी चाट्छ र खरोंचलाई कम पार्ने कोशिस गर्दै। जब यो उन्नत प्लेग हो, हामी जान्न सक्दछौं कि पशुको शरीरमा रौंविरहित क्षेत्रहरू छन्।
मेरो बिरालो भागेको छ भने कसरी म भन्न सक्छु?
पिस्सा भएको बिराला जनावरमा परिणत हुनेछ जुन घबराइ, अस्वस्थ र आक्रामक पनि हुन सक्छ जब इन्फेस्टेसन धेरै उन्नत भएको छ। तर पहिलो चिन्ह जसले हामीलाई भन्दछ कि यो छ स्क्र्याचि time समय खर्च गर्दछ। तपाईं यो ठूलो शक्ति संग गर्न सक्नुहुन्छ, जो प्रभावित क्षेत्रमा सामयिक घाउको कारण हुन सक्छ।
एक प्रभावकारी र धेरै छिटो तरीका यो थाहा पाउनको लागि यदि यो कपालमा कपाल पारेर आफ्नो कपाल उठाएर हो। यदि तपाईं उसको पछाडि, कानको पछाडि, पुच्छरको फेदमा वा पेटमा चम्किलो कालो थोप्लाहरू देख्नुहुन्छ भने, उसलाई कीराण गर्नु बाहेक अरू विकल्प हुँदैन।.
बिरालाहरुमा पछाडि रोकथाम
किनकि कोही पनि उनीहरूको घरमा भाँडा लिन चाहँदैनन् र तिनीहरूको बिरालोले उनीहरूलाई दु: ख नपाओस् भनेर, हामीले गर्न सक्ने उत्तम कार्य उनीहरूलाई रोक्नु हो। कसरी? खैर, त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन्: रसायनिक रूपमा y Naturalmente.
बिरालाहरुमा फ्लाईससँग लड्न रासायनिक कीटनाशक
घरपालुवा जनावर पसल र पशु चिकित्सा क्लिनिकमा तपाईले बिक्रीको लागि फेला पार्नुहुनेछ antiparasitic पाइपेट्स, कलर, गोली र स्प्रे। प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै फाइदाहरू हुन्छन् र यसका कमजोरीहरू पनि छन्, त्यसैले हामी उनीहरूलाई छुट्टै रूपमा हेर्नेछौं:
तिनीहरू लागू गर्न धेरै सजिलो छ, जबसम्म बिराला डराउँदैन 🙂। जनावर होशियारीपूर्वक राखिएको छ तर दृढतापूर्वक, कपालहरु घाँटीबाट अलग गरिएको छ (पछाडि), र उत्पादन लागू गरियो। तिनीहरूसँग एक महिनाको प्रभावकारिता छ, र सत्य यो हो तिनीहरू धेरै उपयोगी छन्, विशेष गरी यदि तपाईं बाहिर जानुहुन्छ।
यद्यपि, धेरै सतर्क रहनुहोस् जहाँ यसलाई पुग्न सकिने ठाउँमा राख्नु हुँदैन, किनभने अन्यथा तपाईं मादित हुन सक्छ।
कलरहरू पिपेटहरू भन्दा अलि सस्तो हुन्छन्, र अत्यधिक सिफारिश गरिन्छ जब हामी यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं कि हाम्रो बिरालो हरेक चोटि ऊ आँगनमा बाहिर जानेछैन। तिनीहरू एक महिनाको लागि पनि प्रभावकारी छन् कम्तिमा weeks हप्ता सम्म हामी शान्त हुन सक्छौं.
समस्या देखा पर्नेछ यदि हामी यसलाई बाहिर जान दियौं भने। अक्सर यी नेकलेसहरूमा सुरक्षा लक हुँदैन, र यदि तपाईं हुक हुनुभयो भने ... मलाई धेरै समस्या हुन्छ। त्यसोभए यदि तपाइँ यसलाई जान दिनुहुन्न भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यस प्रकारको क्लिपको साथ नेकलेस खरीद गर्नुहुन्छ।
पिल्स व्यापक रूपमा 'अन्तिम रिसोर्ट' को रूपमा प्रयोग गरिन्छ। जब बिरालाहरुमा चिसो लाग्ने ठाउँ महत्वपूर्ण छ, वा यदि तपाईंसँग प्राय: धेरै छ भने, औषधीले तपाईंलाई शान्तिमय जीवन बिताउन मद्दत गर्दछ, यी परजीवीहरूको बारेमा अधिक चिन्ता बिना। यसको प्रभावहरू १ देखि or वा months महिनासम्म जुन तपाईं यसलाई दिनुहुन्छ त्यसमा रहन सक्छ।
हो, आफ्नो पशु चिकित्सकको सहमति बिना कहिल्यै एक साथीलाई नदिनुहोस्किनकि यसले एलर्जीको प्रतिक्रिया निम्त्याउन सक्छ र जीवन धम्की दिन सक्छ।
यसको दक्षता र कम लागतका लागि व्यापक रूपमा ह्याचरी, पशु आश्रय र संरक्षणकर्ताहरूमा प्रयोग गरियो। यो एक धेरै राम्रो विकल्प हो जब हामी थोरै पैसा बचत गर्न चाहान्छौं, र बिरालोलाई पछाडि स्वतन्त्र राख्छौं.
तर ... (सबै चीजसँग एक तर छ), आँखा, नाक, मुख र कान संग धेरै सावधान रहनुहोस्अन्यथा हामीले उनलाई पशु चिकित्सकमा लगेर जानुपर्नेछ।
केहि समयको लागि, यो प्राकृतिक कीटनाशकहरू फेला पार्न बढि सामान्य छ जुन जनावरलाई कुनै समस्या नपार्दछ। नेकलेसहरू, पिपेट्स, स्प्रेहरू ... जुन रसायनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तर तिनीहरू प्राकृतिक हुनाले भिन्न हुन्छन्, त्यो हो, यदि तपाईंको बिरालोले प्राकृतिक पिपेटबाट केही तरल चाट्यो भने पनि, उसलाई केहि हुने थिएन।
तिनीहरू एलर्जीको साथ बिरालाहरूको लागि उत्तम विकल्प हो, र दिनभर घरमा बस्नेहरूका लागि पनि। केवल कमजोरीहरू यो हो यसको प्रभावकारिता कम रहन्छ, त्यसैले उपचार अधिक पटक दोहोर्याउनु पर्छ (सामान्यतया, हरेक १ 15 दिनमा एक पटक), र यदि प्यारी बाहिर जान्छ भने तिनीहरू प्रायः उपयोगी हुँदैनन्। तर तिनीहरू धेरै सस्तो छन्, र सत्य यो हो कि ती प्रयास गर्न लायक छन्।
अझै, यदि तपाईं पैसा खर्च गर्न चाहनुहुन्न र घरमा आफ्नै प्राकृतिक कीटनाशक बनाउन चाहानुहुन्छ, यहाँ तपाईंसँग विभिन्न फ्लाई उपचारहरू छन्।
बिरालाहरूमा चिसोको लागि घरेलु उपचार
यी परजीवीहरूलाई नीबूको गन्ध पटक्कै मनपर्दैन। टुक्रा मा एक कागती काट्नुहोस् र भाँडोमा उमालेको मा ल्याउनुहोस्। उनीहरूलाई रातरात बस्न दिनुहोस्, अर्को दिन, कपडा वा स्पन्जसहित, तपाईंको बिरालालाई नुहाउनुहोस्।
भिटामिन बी १ मा रिच, तपाइँको बिरालोबाट पिस्सू टाढा राख्छ। एउटा सानो चम्मच जोड्नुहोस् र यसलाई तपाईंको दैनिक खानासँग मिसाउनुहोस्, र तपाईं यी पेस्की परजीवीहरूलाई सदाका लागि बिदा भन्न सक्नुहुन्छ।
चिया रूख आवश्यक तेल
यो बिरालाहरुमा पिसोको बिरूद्ध सबैभन्दा प्रभावकारी प्राकृतिक उपचारहरू मध्ये एक हो, र प्रयोग गर्न सजिलो छ। चिया रूखको तेल स्प्रे पाउनुहोस्, र तपाईंले केवल आफ्नो बिरालोलाई आँखा, नाक, मुख र कानहरूसँग सम्पर्क बेवास्ता गर्न स्प्रे गर्नुपर्नेछ।
के तपाईंलाई थाहा छ कि क्यामोमाइल चियाले भागेको छ? हैन? एउटा जलसेक बनाउनुहोस् र, पानी तातो हुने बित्तिकै, त्यसमा स्पन्ज वा कपडा ओसिलो बनाउनुहोस् र यसलाई पशुको शरीरमाथि सफा गर्नुहोस्।
फ्ल्यासहरू परजीवीहरू हुन् जुन मैले वर्षैपिच्छे सम्झौता गर्नुपर्दछ। मैले मेरा बिरालाहरू मात्र होइन मेरा कुकुरहरू पनि जोगाउनु पर्छ। मलाई एक वर्षको सम्झना छ, २०१० वा त्यो भन्दा मा, हामी घरमा घरमा प्लेग थियौं। यो मेरो जीवनको सबैभन्दा नराम्रो अनुभव थियो। हामीले दिनदिनै सबै पानाहरू, टेबलक्लोथहरू, लुगाहरू धुनुपर्थ्यो, कीटनाशकले भुइँ सफा गर्नुपर्थ्यो। जे भए पनि, सौभाग्यवश कीट नियन्त्रण सेवा कल गर्न आवश्यक थिएन, तर मैले बिरालामा राखेको पाइपेट त्यति त्यति प्रभावकारी थिएन।
यस भिडियोमा तपाईंलाई घरको उपचारहरू प्रयोग गरेर घरमा हुनसक्ने फ्लाईहरू कसरी हटाउने भनेर जान्नुहुनेछ:
म भन्न सक्दिन कि प्राकृतिक वा रासायनिक कीटनाशकहरू बिरालामा पसीको बिरूद्ध लड्नका लागि उत्तम छ। यो पशु कहाँ बस्ने र यो बाहिर जान अनुमति छ कि छैन मा धेरै निर्भर गर्दछ। मेरो केसमा, मसँग रासायनिक पिपेटहरू राख्नु बाहेक अरू विकल्प थिएन, जब तिनीहरू बाहिर जान्छन्, प्राकृतिकहरूले उनीहरूलाई खेतमा हुँदा उनीहरूले धेरै मद्दत गर्दैनन्। तर यदि तपाईंको प्यारो सँधै घरमा रहनेछ भने, मेरो सल्लाह त्यो हो यसलाई प्राकृतिक बनाउनुहोस्यस तरिकाले, तपाईं अनावश्यक जोखिम लिनबाट जोगिनुहुनेछ।
तपाईले छनौट गरेको उत्पादनको बाबजुद, यो महत्त्वपूर्ण छ कि सल्लाहको लागि आफ्नो पशु चिकित्सकलाई सोध्नुहोस् किनकी उसलाई तपाईको बिरालोको मेडिकल ईतिहास थाहा छ र तपाईलाई बताउन को लागी सक्षम हुनेछ कि कुन उसको लागी सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ।
कोही पनि बिरालाहरुमा फ्लीहरू हेर्न चाहँदैनन्, तर हामीसँग यसको विकल्प छैन हामी सकेसम्म उत्तम सहन सक्छौ, कि त रासायनिक कीटनाशकसँग, वा घरमा आफ्नै उपचारहरू तयारी गर्दै।
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » रोगहरू » बिरालाहरुमा फुस्रा
म तिनीहरूलाई माया गर्छु मेरो लगभग दुई वर्ष पुरानो हो। मैले फ्लाई शैम्पू र फ्लाई स्प्रे राखेको छु, मसँग एक छ, उसले नुहाउन दिदैन, म उसलाई मेक्सिको खाना दिन्छु।
मिठोलाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईंलाई कालो बिरालाहरूबारे सबै थाहा छ जस्तो लाग्छ? यसलाई तपाईं चकित पार्नुहोस्